Fahatsiarovana sy fianarana ny valisoa Fitiavana fitiavana, firaisana ara-nofo ary Internet
Home fianarana Memory & Learning
"Ny tanjon'ny fitadidiana dia tsy ny famelana antsika hitadidy ny lasa, fa ny hamela antsika hiandry ny ho avy. Fahatsiarovana ny fitaovana fahatsiarovana. ”
Ireto misy lahateny roa ilaina amin'ny TED momba ny herin'ny fianarana.
Ny voalohany dia nataon'ny profesora Stanford Carol Dweck amin'ny herin'ny finoana fa afaka mivoatra isika. Ny tiany holazaina dia ny hoe "ezaka sy fahasarotana" amin'ny fanandramana dia midika fa manao fifandraisan-doha vaovao ny neurônaly rehefa mianatra sy mihatsara isika. Izany dia atambatra amin'ny finiavana hanampy ny fananganana volo fotsy / neurônaly amin'ny korteks prefrontal.
Ny faharoa dia amin'ny Angela Lee Duckworth ary mihevitra ny anjara asan'ny "grit" amin'ny famoronana fahombiazana.
Ny fianarana dia fiovana amin'ny fitondran-tena vokatry ny traikefa. Manampy antsika hifanaraka amin'ny tontolo iainantsika izany. Ny fifehezana klasika dia endrika fianarana iray izay antsoina indraindray hoe "Fifehezana Pavlovian". Ny paozin'ny lakolosy miverimberina miaraka amin'ny sakafo dia nahatonga ny alikan'i Pavlov ho salira tamin'ny feon'ny lakolosy irery. Ohatra hafa amin'ny fifehezana Pavlovian ny fianarana mahatsapa fanahiana:
1) Amin'ny fahitana ny jiro polisy manjelanjelatra eo amin'ny fitaratry ny masonao; na
2) Rehefa maheno feo any amin'ny biraon'ny mpitsabo nify ianao.
Ny mpampiasa pôrnôgrafia mahazatra dia mety hametraka ny filan-dratsiny amin'ny sarimihetsika, hijerena fihetsika sasany, na tsindrio avy amin'ny horonan-tsary ka hatramin'ny horonan-tsary.
Ity fizarana ity dia mifototra amin'ny fitaovana avy amin'ny “Ny ati-doha hatrany ambony ka hatrany ambany”Torolàlana open source novokarin'ny University McGill any Canada. Tena soso-kevitra tokoa raha te hahalala bebe kokoa ianao.
Ny fianarana dia dingana iray ahafahantsika mitazona fampahalalana azo, toe-javatra misy fiatraikany (ara-pihetseham-po), ary fahatsapana izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitondran-tenantsika. Ny fianarana no lahasa lehibe ataon'ny ati-doha, izay anaovan'ity taova ity tsy tapaka ny endriny manokana mba hanehoana tsara ireo zavatra niainantsika.
Ny fianarana koa dia azo ampitahaina amin'ny encoding, ny dingana voalohany amin'ny dingan'ny fahatsiarovana. Ny vokatr'izany - fahatsiarovana - dia ny fikirizan'ny data autobiografia sy ny fahalalana ankapobeny.
Fa ny fahatsiarovana dia tsy mahatoky tanteraka. Rehefa mahatsapa zavatra ianao, dia misy vondrona Mason'ny amin'ny faritra samihafa ao amin'ny atidohanao dia asio ny fampahalalana momba ny endriny, ny lokony, ny fofony, ny feony, sns. Avy eo ny ati-dohanao dia mampifandray fifandraisana amin'ireo vondron-neurons isan-karazany, ary ireo fifandraisana ireo dia ny fahitanao ilay zavatra. Aorian'izay, isaky ny tadidinao ilay zavatra dia tsy maintsy averinao ireo fifandraisana ireo. Ny fanodinana mitovy izay ataon'ny kortonao ho an'ity tanjona ity, na izany aza, dia afaka manova ny fitadidianao ilay zavatra.
Ary koa, ao amin'ny rafi-pahatsiarovan'ny atidohanao, ny fampahalalana mitokana dia haverina tsianjery tsy dia misy vokany firy noho ireo mifandray amin'ny fahalalana efa misy. Arakaraka ny ifaneraseran'ny fampahalalana vaovao sy ny zavatra efa fantatrao no hahalalanao azy bebe kokoa. Ohatra, hanana fotoana mora tadidy ianao fa ny taolana am-bava dia mifamatotra amin'ny taolana feny, ny taolana feny mifamatotra amin'ny taolana lohalika, raha efa manana fahalalana fototra momba ny anatomie na mahafantatra ilay hira ianao.
Ny psikology dia nahita antony maromaro izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fahatsiarovan-tena.
1) Fepetran'ny fiambenana, fahamailoana, fitandremana ary fifantohana. Ny fahatsiarovan-tena dia lazaina matetika fa fitaovana manasokitra ny fampahalalana ho fahatsiarovana. Ny fifantohana dia ny fototry ny neuroplasticity. Ny tsy fahampian'ny saina dia mety hampihena tanteraka ny fahatsiarovan-tena. Ny fotoana be loatra amin'ny efijery dia mety hanimba ny fitadidiana miasa ary hamokatra soritr'aretina izay manahaka ny ADHD. Azontsika atao ny manatsara ny fahaizantsika mitadidy amin'ny alàlan'ny fiezahana mafy hamerina sy hampiditra vaovao. Ny fanentanana izay mampiroborobo ny fahavelomana ara-batana tsy misy fahatsiarovan-tena, toy ny erotika, dia tsy mitaky ezaka feno fahatokisana mba hisarika ny saina. Mila fiezahana mafy ny hijery azy io foana.
2) Fahalianana, tanjaky ny antony manosika ary filàna na filàna ilaina. Mora kokoa ny mianatra rehefa mahaliana antsika ilay lohahevitra. Noho izany, ny antony manosika dia singa manatsara ny fitadidiana. Ny tanora sasany izay tsy dia mahavita tsara loatra ny lohahevitra izay tereny hianarana dia matetika manana fahatsiarovana mahatalanjona momba ny antontan'isa momba ny fanatanjahantena na tranonkala ankafizin'izy ireo.
3) Soatoavina mahavariana (pihetseham-po) mifandray amin'ilay fitaovana hatao tsianjery, ary ny ny toetran'ny tsirairay ary ny hamafin'ny fihetsem-po. Ny toetsika ara-pientanam-po rehefa misy tranga iray dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahatsiarovantsika azy. Noho izany, raha misy zavatra mahasosotra na manaitra tokoa, dia hamorona fitadidiana mazava tsara momba izany isika. Ohatra, maro ny olona no mahatadidy ny toerana nisy azy ireo rehefa nahalala ny fahafatesan'ny Princess Diana, na ny fanafihana tamin'ny 11 septambra 2001. Ny fikarakarana ireo hetsika voafitaka amin'ny fahatsiarovan-tena dia mitaky ny norepinephrine / noradrenaline, neurotransmitter izay navotsotra betsaka kokoa rehefa faly izahay na mihenjana. Araka ny filazan'i Voltaire azy, izay manohina ny fo dia voasokitra ao anaty fitadidiana.
4) Toerana, hazavana, feo, fofona… Raha fintinina, izy rehetra teny manodidina izay anaovana ny fanaovana tsianjery dia voarakitra miaraka amin'ireo fampahalalana tsianjery. Ny rafi-pitadidiantsika dia ara-nofo. Vokatr'izany, rehefa manana olana amin'ny fitadiavana zava-misy manokana isika dia mety ho afaka mamerina azy io amin'ny alàlan'ny fitadidiana izay nianarantsika azy na ilay boky na tranokala izay nianarantsika azy. Nisy sary ve tamin'io pejy io? Ny fampahalalana ve dia manakaiky ny tampon'ny pejy, sa ny any ambany? Ny entana toy izany dia antsoina hoe "index index". Ary satria mitadidy ny zava-misy foana izahay miaraka amin'ireo fampahalalana ianarantsika, amin'ny alàlan'ny fitadidiana an'io toe-javatra io dia afaka matetika isika, amin'ny alàlan'ny fikambanana maromaro, no mahatadidy ilay fampahalalana.
Ny fanadinoana dia mamela antsika hanary ireo fampahalalana marobe izay arahinay isan'andro fa ny atidohantsika kosa dia manapa-kevitra fa tsy mila izany amin'ny ho avy. Manampy amin'ity dingana ity ny torimaso.
<< Ny fianarana no lakile Fitsaboana ara-nofo >>